Kaliya iibso waxyaabaha WIC ee aad u baahan tahay. Uma baahnid inaad wax walba qaadato.
Markaad jeeg ka dhigeyso kaarkaaga eWIC waxaad gelisaa akhristaha kaadhka. Ku qor nambarkaaga lambarkaaga iyo guji geli.
Kaarka dukaanka ayaa markaa ka waci doona raashinkaaga. Akhristaha kaadhka ayaa ku weydiin doona inaad xaqiijiso cuntooyinka WIC ka hor inta aan laga gooyin iibsashada WIC ee kaashka kaarka.
Khasnajigu wuxuu ku siin doonaa rasiidka dhammaadka ah ee kaa harsan dheelitirka faa'iidooyinka cuntada ee WIC. Waxaad heli kartaa liis cunto oo cusub oo leh baaqii kugu soo haray bilaha ee xafiiska WIC ee degaankaaga.
Dhamaan faa'iidooyinka cuntada ee bisha soo socota ee ku yaala kaarka ayaa ku dhici doona saqda dhexe maalinta ugu dambeysa ee bisha.
Arkansas WIC Liiska Cunnada ee la ansixiyey
Keliya Wakiilka Idman ee xafiiska WIC ayaa badali kara PIN-ka kaarka eWIC.
Ha isku dayin inaad ka fikirto lambarkaaga PIN. Haddii PIN-da saxda ah ee aan la galin imtixaanka toddobaad, PIN-gaaga ayaa la xirayaa. Tani waxaa loo sameeyaa sidii looga ilaalin lahaa qof kugula talinaya PIN iyo helitaanka faa'iidooyinkaaga cuntada.
Haddii kaarkaaga eWIC uu kaa lumo, la xado ama waxyeello heysto ama aad qabtid su'aalo ku saabsan cuntooyinka WIC ama xadiga la xiriir xafiiskaaga WIC ee xaafaddaada adiga oo ku dhejinaya "Soo hel xafiiska WIC"Badhanka. Waxa kale oo aad wici kartaa WIC Xafiiska Gobolka 501-661-2508 or 1-800-462-0599 or wic.program@arkansas.gov.